Ifulethi elithokomele uLill Backa noLoftet eduze kwaseLuleå.
Luleå V, Norrbottens län, i-Sweden
Siyakwamukela ku-Lill Backa nase-Loftet!
Leli fulethi elihle lisendaweni ebukekayo eqhele ngamakhilomitha angama-20 ngaphandle kwedolobha laseLuleå kanye nemizuzu eyi-15 ngemoto usuka eKallax, eLuleå Airport. Ifulethi lingaphakathi kwepulazi lomndeni elisukela ekuqaleni kwekhulu lama-20. Ezidlelweni ezizungezile, kokubili izinkomo namahhashi kuyaklaba. Kusukela ngo-August kuya ku-March ungakwazi, uma isimo sezulu sivuma, ubone kokubili i-Milky Way kanye ne-Northern Lights.
Leli fulethi elihle lisendaweni ebukekayo eqhele ngamakhilomitha angama-20 ngaphandle kwedolobha laseLuleå kanye nemizuzu eyi-15 ngemoto usuka eKallax, eLuleå Airport. Ifulethi lingaphakathi kwepulazi lomndeni elisukela ekuqaleni kwekhulu lama-20. Ezidlelweni ezizungezile, kokubili izinkomo namahhashi kuyaklaba. I-Lill Backa itholakala ukuze phakathi nengxenye emnyama yonyaka ukwazi ukubona kokubili i-Milky Way nezibani zasenyakatho.
Esigodini kukhona uRalph Lundstensgården (umqambi wamaculo odumile uRalph Lundstens hemgård) lapho, ngezinye izinsuku, isidlo sasemini, isidlo sakusihlwa kanye / noma ikhofi kunikezwa futhi kuhlelwa ubusuku beshibhile / umsebenzi wangemuva. Esigodini kunemizila yokuhamba izintaba endaweni ehlukahlukene, imizila yokukhanya kagesi enemizila ye-ski elungisiwe ebusika, i-ice rink ye-ice skating kanye nenkundla yebhola eduze kwendawo. Umzila owaziwayo wokuqwala izintaba osuka eLuleå uye eSundsvall yiSollanderleden. Isitolo esiseduze negalaji likaphethiloli kuphakathi kwamakhilomitha amane. 10 km ukuya emthambekeni oseduze we-slalom, i-Måttsundsbacken.
Abanikazi bezindlu bangafinyelelwa ngomlayezo ku-Airbnb. Lapho ubhukha, izinombolo zocingo zinikezwa ukuze kube lula ukuxhumana naye. Abanikazi bezindlu bangatholwa nasekhaya (epulazini).